ပြင်ဦးလွင်က အလှဆုံးဟိုတယ်များ - LODGGY
🌲ပန်းမြို့တော် ပြင်ဦးလွင်က အရမ်းလှတဲ့မြို့လေးဖြစ်သလို တည်းခိုဖို့ ဟိုတယ်လှလှလေးတွေလည်း အရမ်းပေါပါတယ်။ တောင်ပေါ် အငွေ့အသက်ရစေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘန်ဂလိုလေးတွေမှာတည်းရင်တော့ ခရီးသွားဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေအပြင် ဟိုတယ်လေးတွေနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေပါ ရိုက်လို့ရမှာပါ။ နောက်တစ်ခါ ပြင်ဦးလွင်သွားရင် ဘယ်မှာတည်းကြမလဲဆိုတာ ဟိုတယ်ကြိုရွေးလိုက်ရအောင်..
🌲အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Tiny House အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပထမဆုံး Tiny House လေးပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်စုံအိမ်သေးသေးလေးတွေထဲမှာမှ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အိမ်လေးတွေနဲ့ကော၊ အိမ်အထဲမှာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်က ခုံလှလှလေးတွေမှာထိုင်ပြီး အေးချမ်းလှပတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ အလှတရားတွေနောက်ကို စီးမျောလို့ရပါတယ်။
🔸လိပ်စာ – လမ်းသာယာလမ်း သစ္စာလမ်းသွယ်၊ ဂန္ဓမာမြိုင်ပန်းခြံနှင့် မြို့ပတ်လမ်း (ကန်တော်ကြီးအဝိုင်း) အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
2.Golden Gate Guest House
🌲ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ နာမည်ကြီး San Francisco Restaurant ကဖွင့်ထားတဲ့ Golden Gate Guest House၊ သူ့ရဲ့တမူထူးခြားချက်က Smurf ဇာတ်လမ်းထဲကအိမ်လေးတွေလို ချစ်စရာလုံးချင်းပုံစံတွေနဲ့ဆောက်ထားတာပါ။ သစ်သားအိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ ရွံ့အိမ်၊ ကျောက်တုံးအိမ် ဘန်ဂလိုလေးတွေမျိုးစုံနဲ့မို့ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းသလို ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုတွေရယ်၊ ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးတွေတော့ အရမ်းကြိုက်ကြမှာပါ။ ပြင်ဦးလွင် အငွေ့အသက် အပြည့်အဝရတဲ့ နေရာလေးပါ။
🔸လိပ်စာ – 91/B ဂေါက်ကွင်းလမ်း၊ ရပ်ကွက် (၅)၊ ပြင်ဦးလွင်ပါ။
3.Aureum Palace Hotel & Resort
🌲နာမည်ကြီး Aureum Palace Hotel and Resort ကတော့ မန္တလေး – လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပြီး မြေနေရာအကျယ်ကြီးမှာ ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ ဟိုတယ်ဝင်းထဲမှာလည်း ထင်းရှုးပင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေအုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့မို့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး ပြင်ဦးလွင်မှာ အနားယူအပန်းဖြေဖို့ အကောင်းဆုံး ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ ရှေးမူလက်ရာမပျက် တည်ဆောက်ထားတဲ့ တစ်ခါကဗြိတိသျှဘုရင်ခံအဆက်ဆက်ရဲ့ နွေရာသီအပန်းဖြေစံအိမ်တော်ကိုလည်း သွားရောက်တည်းခို လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။
🔸Address : Ward (5), Governor’s Hill, Pyin Oo Lwin, Mandalay-Lashio Highway, Pyin Oo Lwin.
4.Hotel Sein Chuu
🌲ခေါင်မိုးချွန် ရောင်စုံဘန်ဂလိုလှလှလေးတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ နေရာကတော့ အနီးစခန်းနားမှာပါ။ ၂ ယောက်ခန်း Building / Bungalow ရယ် ၂ မျိုးရှိသလို ၃ ယောက်၊ ၄ ယောက်၊ ၆ ယောက်အထိတည်းခိုနိုင်တဲ့ ဘန်ဂလိုလေးတွေရှိလို့ မိသားစု၊ အဖွဲ့လိုက်သွားမယ့်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ မြက်ခင်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ ကလေးတို့ပျော်စရာ မီနီကစားကွင်းလေးလည်း ရှိပါတယ်။
🔸လိပ်စာ – မန္တလေး လားရှိုး လမ်းမကြီးပေါ်၊ မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၆/၆၊ အနီးစခန်း ၊ ပြင်ဦးလွင်။
5.Hotel Pyin Oo Lwin
🌲ကန်တော်ကြီးသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိပြီး ဟိုတယ်ကနေ ကန်တော်ကြီးကို ၁၀ မိနစ်လမ်းလျှောက်သွားရုံနဲ့ရောက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ခြံဝန်းထဲမှာ ထင်ရှုးပင်၊ ပန်းပင်လေးတွေနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး ပြင်ဦးလွင်နာရီစင်၊ ရေတံခွန်လေးတွေ၊ ရေကန်လေးတွေပေါ်မှာ သစ်သားတံတားလေးနဲ့ အလှဆင်ထားတာမို့ နောက်ထပ်ပြင်ဦးလွင်မြို့အသေးလေးထဲရောက်သွားသလို ခံစားရမှာပါ။ Spa, Gym, Bar နဲ့ ရေကူးကန်လည်းရှိပြီး ရေကူးကန်ကိုတော့ အမိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတော့ ရာသီဥတုသိပ်မကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း ရေကူးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။
🔸လိပ်စာ – အမှတ် (၉)၊ နန္ဒာလမ်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
6.Hiromi Resort Hotel
🌲အုတ်နီတိုက်လေးတွေကို ချစ်စရာဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပြင်ထားတဲ့ Hiromi Hiromi ကတော့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ဆိတ်ငြိမ်နေရာလေးမှာရှိပါတယ်။ ခြံဝန်းထဲမှာလဲ အပင်လေးတွေ၊ မြက်ခင်းပြင်လေးတွေစိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ တကယ်ပဲ အေးချမ်းပါတယ်။ ၂ ထပ်ဆောင်လေးနဲ့ အခန်းလေးတွေလဲရှိတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနားနေချင်တဲ့လူတွေနား၊ အပေါ်ထပ်က ဝရန်တာလေးမှာလဲ မြင်ကွင်းလေးတွေငေးရင် ပဲပေး၊ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်နော်။
🔸Address: No. 78, Tin Oo Lwin Road, Block6, Pyin Oo Lwin.
7.Royal Reward Resort
🌲လေးဧကကျယ်ဝန်းသောမြေဧကပေါ်မှာ အုတ်နီရောင် အိမ်လှလှလေးတွေရယ်၊ ဘန်ဂလိုလေးတွေရယ် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ အချက်အခြာကျပြီး အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်တယ် ခြံဝန်းကျယ်ထဲမှာ ပန်းခြံလှလှလေးနဲ့မို့ နေရာတိုင်းက ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှ၊ အညောင်းညာပြေလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းသလို ကလေးတွေနဲ့ လာရောက်တည်းခိုမယ့်မိသားစုတွေအတွက်လည်း အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။
🔸လိပ်စာ-အမှတ် (၃၆) ၊ မြို့ပတ်လမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်။
8.Kandawgyi Hill Resort
🌲ကန်တော်ကြီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာပဲရှိပြီး ၁၉ ရာစုနှစ် ဗိသုကာနဲ့ ခေတ်မှီတဲ့ ၂၀ ရာစုနှစ် ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Resort တစ်ခုပါ။ ခေတ်မီဘန်ဂလိုလေးတွေက ကိုလိုနီစတိုင်ပင်မဆောင်ကြီးကို ခြံရံပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတာမို့ သမိုင်းကြောင်းထဲစီးမြောချင်သူတွေအတွက်ရော ခေတ်ဆန်ဆန်ဟိုတယ်ခန်းမှာနေချင်သူတွေအတွက်ပါ အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။
🔸လိပ်စာ – နန္ဒာလမ်း၊ ရပ်ကွက် ၆၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။
9.Royal Green Hotel
🌲မြို့ထဲကနေ ကန်တော်ကြီးသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာ ရှိတာပါ။ ဟိုတယ်ကနေ မြို့ထဲကို လမ်းလျှောက်ရင် ၁၀ မိနစ်၊ ၁၅ မိနစ်ပါပဲ။ ဟိုတယ်မှာ အဆောင်ဟောင်းရဲ့ သိပ်မကြာသေးခင်နှစ်တွေက ဆောက်ထားတဲ့ အဆောင်သစ်ရယ်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ Building အသစ်မှာ Rooftop Pool ပါတာပါ။ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ အလှအပတွေကို အပေါ်စီးကနေ ခံစားလို့ရမှာပါ။ ပြင်ဦးလွင်မှာ Rooftop pool ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသောဟိုတယ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
🔸လိပ်စာ – အမှတ် (၁၇) ဇီဝကလမ်း နှင့် ပြည်တော်သာ (၁) လမ်းထောင့်၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၅)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ပါ။
10.The View Resort
ပြင်ဦးလွင် အနီးစခန်းမှာရှိပြီး တောတောင်ရေမြေ သဘာဝ ရှုခင်းတွေနဲ့ ဓါတ်တော်ချိုင့်ရေတံခွန်အလှကို အကောင်းဆုံးခံစားနိုင်စေမယ့် နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြင်ဦးလွင်ရဲ့အကောင်းဆုံး Resort တွေထဲက တစ်ခုပါ။
The View Resort မှာအခန်းအမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိပါတယ်။
1.CREST VILLA – တောင်ကုန်းထိပ်လေးပေါ်မှာ ရှိတဲ့ နားနေဖို့ အိမ်လေးပေ့ါ၊ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်း နားနေဖို့ အခန်းလေးခန်းပါပါတယ်။ သီးသန့် ရေကူးနိုင်ဖို့ ရေကူးကန်လည်းပါပါတယ်။ ဘား၊ ကာရာအိုကေ နဲ့ ပါတီပွဲကျင်းပရင်း လှပတဲ့ ရှု့ခင်းများကိုလည်း ခံစားနိုင်ပါတယ်။
2.NIRVANA COTTAGES – ရေတံခွန် ရှု့ခင်းကိုကြည့်ရင်း သီးသန့်ရေချိုးကန်လေးမှာ ပန်းလေးတွေနဲ့အတူ ရေချိုးလို့ရတယ်၊ ရှားပါးသစ်တွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ သီးသန့်ဘန်ဂလိုလေး။
3.BAMBOO GROVE VILLA – ချစ်စရာ ဝါးတောလေးထဲမှာ တည်ဆောက်ထားပြီး ရေတံခွန် ရှု့ခင်းကို အပေါ်စီးကနေ ကြည့်ရှု့ခံစားနိုင်ပါတယ်။ အခန်းအတွင်း ရိုမန်တစ်စတိုင် ဖြင့် တည်ဆောက်ထားတဲ့ ချစ်စရာ အိမ်ကလေး။
🔸လိပ်စာ – ပြင်ဦးလွင် အနီးစခန်း၊ ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ တရားစခန်း အနီး။
ပြင်ဦးလွင် မဟာအံထူးကံသာဘုရားနဲ့ ပွဲကောက်ရေတံခွန်အကျော် မြို့ထွက်တိုးဂိတ် မျက်စောင်းထိုးလောက်မှာရှိတာပါ။ Mico Hill ဆိုတာက ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ လည်စရာ နေရာတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ အမြင့်ပိုင်းလေးကနေ မြင်နေရတဲ့ တောင်တန်းတွေနဲ့ရှုခင်းတွေက ပင်ပန်းတောတွေ မေ့လျော့သွားရလောက်အောင် အရမ်းလှပါတယ်။ မြို့ထဲနဲ့တော့လှမ်းပြီး ရှုခင်းလှလှလေးတွေထဲ အေးအေးချမ်းချမ်း နေချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
🌲ပြင်ဦးလွင်မြို့ ကန်တော်ကြီး သွားတဲ့လမ်းမှာတည်ရှိပြီး ဂျပန်စတိုင် အငွေ့အသက်ရအောင် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ နာမည်ကြီး ပန်းတော်ဝင် စားသောက်ဆိုင်ကလည်း လမ်းထိပ်မှာဆိုတော့ အသားအသောက်တွက်လည်းမပူရတော့ဘူး.. ဟိုတယ် ဝန်းကျင်ကလည်း သစ်ပင်ပန်းပင်တွေနဲ့ မိသားစုလိုက်လာရောက်အပန်းဖြေဖို့သင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဂျပန်စာကြိုက်သူတွေအတွက် ဟိုတယ်ရဲ့ Isakaya Japanese Restaurant ကနေလည်း မှာယူစားသောက်နိုင်ပါတယ်။
🔸လိပ်စာ-အမှတ် (၁၂၆ )၊ ရပ်ကွက်-၆ ၊ ခေမာလမ်း ၊ ပြင်ဦးလွင်။
13.Hilltop Gem Hotel
🌲ပြင်ဦးလွင် မဟာအံ့ထူးကံသာဘုရားကြီးအနီးမှာရှိပြီး ခြံဝန်းကျယ်ထဲမှာ ဘန်ဂလိုလေးတွေအစီအရီနဲ့ အလှပဆုံး ဟိုတယ်တွေထဲက တစ်ခုအပါပါပဲ။ အခန်းတွေကိုလည်း ရတနာနာမည်လေးတွေပေးထားပြီး အခန်းရဲ့ နာမည်လေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် အခန်းတွင်းအရောင်နဲ့ အပြင်အဆင်လေးတွေလည်း ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
🔸လိပ်စာ – ဣစ္ဆာသယလမ်းသွယ်-မဟာအံထူးကံသာဘုရားကြီးလမ်း၊ (မဟာအံထူးကံသာဘုရားကြီအနီး) ရေငယ် ၊ပြင်ဦးလွင်မြို့။
14.White Rose Garden Hotel
🌲 ပုံစံတူဘန်ဂလိုလေးတွေ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိပြီး ဝင်းအလယ်မှာတော့ ပန်းခြံငယ်လေးတစ်ခု ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် မီနီကစားကွင်း၊ နားနေဖို့ခုံတန်းလေးတွေ၊ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမယ့် အပင်လေးတွေခြံရံထားတဲ့ လျှောက်လမ်းလေး၊ သစ်သားတံတားလေးတွေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားသလို အမိုက်စား ရေကူးကန်တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။
🔸Address: New Highway Road of Pyin Oo Lwin, Near Hnee Pagoda, Pyin Oo Lwin.
🌲မန္တလေး – လားရှိုးလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပြီး အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာ ၄ ခန်းတွဲ ဘန်ဂလို၊ ၂ ခန်းတွဲ ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဟိုတယ်တစ်ခုပါ။ ခြံဝန်းထဲမှာလည်း ထင်းရှုးပင်၊ ပန်းပင်တွေ၊ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့သင်္ကေတ ရေတံခွန်ငယ်ပုံစံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပြီး တကယ်ပဲအေးချမ်းပါတယ်။
🔸Address : No.47/48, Mandalay-Lashio Rd, Nandawun Qtr,Ward-9 , Pyinoolwin
16.Shwe Bone Ya Guest House
🌲ပြင်ဦးလွင် အနီးစခန်းမှာရှိပြီး The View နဲ့ နီးပါတယ်။ ခြံအကျယ်ကြီးထဲမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာလှလှလေးတွေနဲ့ အလန်းစားဖန်တီးထားပြီး အခန်းတွဲဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာပါတယ်။ ဟိုတယ်ဝင်းနားက သဘာဝစမ်းချောင်းလေးက ရေစီးသံလေးတွေရယ်၊ ကျေးငှက်သံလေးတွေရယ်နဲ့ တကယ်ပဲ အေးချမ်းတဲ့ ရွှေဘုန်းရပါ။ ဈေးနှုန်းက ၄ ယောက်ခန်းကိုမှ ၂၅၀၀၀၊ ၃၀၀၀၀ ဝန်းကျင်လောက်ပဲ ရှိတာပါ။
🔸အမှတ် (၅၃၁) ချမ်းမြေ့ရိပ်သာလမ်း (The View လမ်း), အနီးစခန်းဘူတာအနီး, အနီးစခန်း ,ပြင်ဦးလွင်မြို့။
17.Hsaung Thazin Hotel
🌲 တရုတ်ဘုံကျောင်းနောက်ဘက်ခြမ်း တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့နေရာမှာရှိပြီး ခြံဝန်းကျယ်ထဲမှာ ပန်းခြံလေးရယ်၊ ၂ ခန်းတွဲ၊ ၄ ခန်းတွဲ ဘန်ဂလိုလေးတွေနဲ့မို့ အေးအေးဆေးဆေးနေချင်သူတွေ အကြိုက်တွေ့ကြတဲ့ ဟိုတယ်ပါ။ Outdoor Swimming Pool တစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။
🔸လိပ်စာ – (၆)ရပ်ကွက်၊ မေတ္တာလမ်း၊ နှင်းဆီခြံ၊ သာသနာ့မဉ္ဇူဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး၊ ပြင်ဦးလွင်။
ပြင်ဉီးလွင်အတွက် ဟိုတယ်ဘိုကင် စုံစမ်းချင်ရင်တော့ ဖုန်း 📱 09 4444 38366 or 09 69 4444 383 ကိုဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ၊ 💬 Lodggy Facebook Messenger ကတဆင့်ဖြစ်စေ၊ စုံစမ်းဘိုကင်တင်နိုင်ပါတယ်။